It would not be difficult to understand the real nature of the Karen and Burman. They are in fact different and distinct genuses and it isadream that Karen and Burman can ever evolveacommon nationality, and this misconception of one homogeneous Burmese Nation has gone far beyond the limits and is the cause of most of the troubles and will lead Burma to destruction if we fail to revise our notions in time. Originally, Karen and Burman belong to two different racial origins (Mongolian, and Tibeto-Burma), religions, philosophies (Animism and Buddhism), social customs and literature. They belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspect on life and of life are different. It is quite clear that the Karen and Burman derive their inspiration from difference sources of history. They have different epics, (e.g. pastoral Phumawtaw-Htawmepah and Burmanised Rama King), different heroes and different episodes. To yoke together two such nations underasingle State, one in numerical minority and other asamajority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be built up for the Government of suchaState. It would be no wisdom to proceed to build for Burmaaconstitution on the assumption that these differences did not exist. Karens,anation notaminority Karens came to Burma as first settlers and spread throughout the length and breadth of the “Golden Chersonese” – the Indonesian peninsulas between the Bay of Bengal and the South China Sea, and right down to Borneo today the millions of Karen in both Burma and Siam represent the largest compact body of Karen population in any single part of the world. It has always been taken for granted mistakenly that the Karens areaminority and of course we have got used to it for suchalong time that these settled notions sometimes are very difficult to remove, Karens areanation according to any definition ofanation. We (the Karens) areanation with our own distinctive culture and civilization, language, literature, names and nomenclature, sense of value and proportion, customary laws and moral codes, aptitudes and ambitions; in short we have our own distinctive outlook on life and of life. By all Canons of International Law we areanation.Burma problem The Problem in Burma is not [of] an inter-communal character but manifestly of an international one, and it must be treated as such. So long as this basic and fundamental truth is not realized, any constitution that may be built will result in disaster and will prove destructive and harmful not only to the Karens but to the British and the Burmans also. If the British Government are really in earnest and sincere to secure peace and happiness of the peoples in Burma, the only course to us all is to allow the major nations separate “homelands” by dividing Burma into “Autonomous National States”. There is no reason why theses States should be antagonistic to each other. On the other hand the rivalry and the national desire and efforts on the part of one to dominate the social order and establish political supremacy over the other if the Government of the country will disappear. It will lead more towards national goodwill by international pacts between them, and they can live in complete harmony with their neighbors. This will lead further toafriendly settlement all the more easily with regard to minorities by reciprocal arrangements and adjustments between Karen-Burma and Burmese-Burma, which will far more adequately and effectively safeguard the rights and interests of the Karens and other minorities.Democracy in Burma Western Parliamentary Democracy System is unsuitable for Burma. Such Democracy as exists in Western Countries is understandable and possible only there, as there exists [there]asingle homogeneous nation andasingle cultural and social organized society, but in Burma conditions are entirely different. Here there are two nations and talk of democracy andasingle unit is impossible. The meaning of democracy in this country can only be, and an electoral system can only result in, the permanent domination ofaBurmese majority overaKaren Society in minority, antagonistic to each other and different in everything that is essential to life, the Barmans and the Karens differ fundamentally.One central government It would be impossible to haveaUnitary Central Government in Burma. Such an arrangement would mean that for every eight representatives in Government, there would be one Karen, or in other words the Burman’s will will be forced on the Karens.Right of self-determination The Karens claimaright of self-determination because they areanational group onagiven territory which is their homeland and in the zones where they are inamajority. In constitutional language they cannot be characterized asasub-national group who cannot expect anything more than what is due fromacivilized government toaminority.Our goal Great Britain wants to rule Burma, the Burmans want to rule Burma and the Karens say that they will not let either the British or the Burmans rule the Karens. We want to be free. We have to define and define beyond doubt, what our goal is. There are many people who either do not understand or misunderstand or do not want to understand, there are ignorant people and it is really amazing how our decisions or resolutions are misinterpreted or misrepresented, in order that there should be no room left for misunderstanding and that no doubt should be left in that mind of any intelligent and sensible people, our position with regards to our goal must be clarified. What is the goal of the All Burma Karen National Union [the main Karen political organization]? What is the ideology and what is its policy? The goal of the All Burma Karen National Union is this – we want the establishment ofacompletely independent State in the South Eastern Zone of Burma with full control finally of Defence, Foreign Affairs, Communications, Customs, currency and Exchange, etc, we do not want in any at the centre. We will never agree to that. If we once agree to that, the Karens will be absolutely wiped out of existence. We will never be tributaries of any power or any Government at the centre so far as the South Eastern Zone of our free national homeland is concerned.Karen state government Our Government will be the people’s Government. You may get it either by force or by agreement. But until you get it, the question of constitution making and the form and the system of Government do not arise. Let us first agree that there shall be two Burmas. Then the constitution making body will be elected by some system from the people, and it is the people who will choose their representatives to go to the constitution making body. The constitution and the Government shall be democratic.Minorities in the Karen State Safeguard for minorities must be provided for wherever there are minorities. No Government will ever succeed without creatingasense of security and confidence in the minorities. Mons and the Karen State Naturally the Karens always have for the Monsasoft corner in their heart. We have absolutely no designs on our Mon friends. The Mons will get from their traditional Sister - the Karen – inspiration and help for preservation of their race, culture, literature etc. Their zone would be an autonomous unit of the Karen State.Karenni principalities The Karenni combined principalities may or may not choose either to federate or confederate with the Karen State. Their first consideration should be whether our status is compatible with theirs.No vivisection Burma is composed of nationalities and surely today she is divided and partitioned by Nature… Burma is being held by the British power and that is the hand that holds and gives the impression of United Burma and United Government. [A] Burmese nation and Central Government do not exist in as much as the various nationalities in Burma are not homogeneous.There are no genuine arguments advanced against the Karen State scheme. The Karen National Union wants the two odd millions Karens in Burma to secure and settle in zones which they could justifiably claim as their homelands and develop their own culture and live inamanner suited to their genius. There is nothing unusual in the demand for partition. When two brothers born of the same parents find it difficult to get on with each other the only effective solution lies in partition.Economical aspect It is argued thataKaren State is notapractical proposition on grounds of economy having regard to the revenue yield of some districts in the eastern borderland. You cannot expect to get handsome revenue unless your taxed area, though rich in resources, is properly developed. Let us not build on sands but let us face facts and figures. Kindly take stock of the revenues of the South Eastern Zone of Burma where revenues are drawn from multifarious sources, e.g lands, rice, timber, salt, rubber, minerals, sea and land customs, fisheries, income-tax, excise, etc. further increase of revenues is depended on the extent of development of the resources and on the security and stability in that country. There is not much to bother about [the] economy so long as we are sensible to cut our coat according to our cloth.Acceptance of the principle The principle of partitioning Burma must be agreed upon at first, then would come the question as to what ways and means should be adopted to give effect to that decision. The question of details will then arise and with good-will. Understanding and statesmanship, we (all the indigenous races) shall, let us hope, settle among ourselves. Where there isawill, there isaway…
Posted by donald at 7:11 AM4comments:
Labels: karens and karen state
A karen History
The Karen,aNationTheir Nature and History
Pre-World War II ErasBurmese Feudalism, British Imperialism and Japanese Fascism
Post World War II ErasDemand for Karen State, Tensions and Armed Conflicts
We are concerned that the tactics of annihilation, absorption and assimilation, which have been practised in the past upon all other nationalities by the Burmese rulers, will be continued by the Burman of the future as long as they are in power.
We are concerned about the postwar independence Aung San - Atlee and Nu - Atlee Agreements, as there was no Karen representative in either delegation and no Karen opinion was sought. The most that the Burman would allow us to have wasapseudo Karen State, which falls totally under Burmese authority. In that type of Karen State, we must always live in fear of their cruel abuse of their authority over us.
Present Day SituationThe Karen under Successive Burmese RégimesThe Revolutionary Areas - The Present Situation
The Karen National Union (KNU)Aims, Policy and Programme
The establishment ofaKaren State with the right to self-determination.
The establishment of National States for all the nationalities, with the right to self-determination.
The establishment ofagenuine Federal Union with all the states having equal rights and the right to self-determination.
The Karen National Union will pursue the policy of National Democracy.
Posted by donald at 7:00 AM No comments:
Labels: A Karen History
13/3/2007 MAE SOT OKRSO School
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့မှ (၁၅) ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများနေထိုင်ရာ ကျေးရွာတရွာကို တရားမ၀င်ကျူးကျော်နေရာဟုဆိုကာ တာ့ခ်ခရိုင်ဝန်အမိန့်ဖြင့် ယမန်နေ့၌ ဖြိုဖျက်ရှင်းလင်းသည်။
လူဦးရေ (၂၀၀) ခန့်နေထိုင်သည့် ကျောက်စက်ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ (၅၀) ခန့်ကို ဒေသဆိုင်ရာ ကွပ်ကဲရေးတပ် စစ်သည်များနှင့် မဲဆောက်မြို့ပိုင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများကဦးဆောင်ကာ မြေထိုး စက်များဖြင့် ဖြိုဖျက်သည်။
ထိုရွာမှ လူကြီး (၆၀) ခန့်နှင့် ကလေးငယ် (၁၄၀) ခန့်တို့ကို ယခုလ (၁၁) ရက် နံနက်စောစော၌ ဒေသခံထိုင်းအာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးသွားပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြ၀တီဖက်ကမ်းသို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်။
ယခုအခါ ၎င်းတို့ကို မြ၀တီဖက်ကမ်းရှိ DKBA ဖားသုံးကောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဆရာတော်က လက်ခံကျွေးမွေးထားသည်။
ယမန်နေ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ရွာဖျက်ချိန်တွင် ဒေသခံများက ကားကြီးကားငယ်များဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး ဖြိုချခံရသည့်အိမ်များမှ အိမ်တိုင်၊ အခင်း၊ အမိုးအကာနှင့် အိမ်မိုးဖက်များကို လာရောက်သယ်ဆောင်သွားကြသည်ဟု ထိုရွာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှ ဆရာတော်ကပြောသည်။
ရွာဖျက်ရာတွင်ပါဝင်သည့် ထိုင်းစစ်တပ်မှ ဗိုလ်ကြီး နိုင်ပီချာချုံချုပ်က “ရွာသားတွေနဲ့ ကလေးတွေကို သနားပါတယ်။ အထက်တာ့ခ်ခရိုင်ဝန်ရဲ့ အမိန့်ဖြစ်တာကြောင့် ကျနော်တို့လည်း တာဝန်အရလုပ်ရ တာဖြစ်တယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ကျောက်စက်ကျေးရွာ၌ ရွာသားများနေထိုင်လာကြသည်မှာ (၂၅) နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ယခုဖမ်းဆီးမှုနှင့် ရွာဖျက်ခံရခြင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထိုရွာသား ကျောက်မိုင်းလုပ်သား တဦးက ပြောသည်။
ရွာသားများမှာ ရွာရှိကျောက်မိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ကြပြီး အချို့က တောင်ယာစိုက်ခင်းများတွင် ကျပန်းအလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြကာ ကလေးငယ်များမှာ ရွာတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကျောက်တောင် မူလတန်းကျောင်း၌ ပညာသင်ကြားကြသည်။
ယနေ့ နေ့လယ်၌ ထိုမူလတန်းကျောင်းအား မြေထိုးစက်ဖြင့်ဖြိုဖျက်ရန် ထိုင်းစစ်သည်များ ရောက်ရှိလာသော်လည်း မဲဆောက်မြို့ ပညာရေးဌာနများက ၀ိုင်းဝန်းမေတ္တာရပ်ခံထားကြောင်း၊ ကျောင်းဖြိုဖျက်မည့်ရက် အတိအကျမသိရသေးကြောင်း ကျောင်းတာဝန်ခံ ဆရာစောစိန်ဟန်က ပြောသည်။
သူငယ်တန်းမှ (၆) တန်းအထိ ကျောင်းသူကျောင်းသား (၁၉၅) ဦးကို သင်ကြားပေးနေသည့် ယင်းအ ခမဲ့မူလတန်းကျောင်းကို ပြည်ပရောက်ကရင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာလူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့(OKRSO) က ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Posted by donald at 6:36 AM 1 comment:
Labels: okrso school
ထိုင်းရဲက တားဆီးသည်ကို လက်မခံဘဲ မောင်းပြေး သောကြောင့် ယဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ကာ ယာဉ်ပေါ် ပါလာသော မြန်မာ အမျိုးသမီး ၇ ဦးနှင့် ထိုင်းအမျိုသား ၁ ဦးတို့ ယမန်နေ့က သေဆုံးခဲ့ ရသည်။ယဉ်ပေါ် ပါလာသူ အမျိုးသမီးများမှာ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ကို တရားမဝင် ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီး အလုပ်ရှာဖွေရန် ရောက်ရှိ လာသူများဖြစ်၍ မွန်နှင့် ထားဝယ် တိုင်းရင်းသူများ ဖြစ်ကြကြောင်း ကြားသိရသည်။ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်အနီး ကန်ချနဘူရီ နယ်အတွင်းရှိ အကြီးဆုံးသော စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ဖြတ်ကျော်စဉ် ထိုင်းရဲများက ကားကိုစစ်ဆေးရန် ရပ်တံ့စေရာ မရပ်ဘဲ မောင်းပြေးသဖြင့် ဓာတ်တိုင်နှင့် ဝင်တိုက်မိပြီး သေဆုံးရသည်ဟု အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။“အဲဒီ လမ်းကြောင်းက တရားမဝင် ခိုးဝင်တဲ့ သူတွေသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းပဲ။ အဲဒီဂိတ်ကြီး မတိုင်ခင် ဂိတ်တခု ရှိသေးတယ်။ ပထမဂိတ်မှာ အဲဒီကား လွတ်သွားပုံရတယ်” ဟု ထိုဒေသနှင့် ကျွမ်းဝင်နီးစပ်သူ တဦးက ပြောပြသည်။ထိုင်းအလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ၅၄၀၀၀၀ မှတ်ပုံတင်ထားပြီး အများစုမှာ မြန်မာများ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း တရားမဝင် အလုပ်လုပ်နေသူ ဦးရေမှာ သန်းနှင့်ချီ၍ ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ဧပြီလ အတွင်းကလည်း ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်လာသည့် အလုံပိတ် အအေးခန်း ကားတစီးထဲတွင် သယ်ဆောင်လာသော တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ကလေး၊ လူကြီး ၅၄ ဦး အသက်ရှူ မွန်းကြပ်ကာ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။မြန်မာပြည်တွင် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့ နယ်စပ်မှ တရားမဝင် ဖြတ်ကျော်ကာ အလုပ်လုပ်ရန် လာရောက်သူများ နေ့စဉ်ရှိနေပြီး တချို့မှာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရဲများ၏ အဖမ်းအဆီး ခံရခြင်း၊ ဒုက္ခမျိုးစုံ ကြုံတွေ့ရခြင်းအပြင် အသက် ဆုံးရှုံးရသည်များ မကြာခဏ ကြားသိရသည်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လာရောက် အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေသော တရားမဝင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများမှာ လုပ်ခနည်းခြင်း၊ အလုပ်ချိန်များပြားခြင်း တစ်ခါတရံ အနိုင်ကျင့် ခံရခြင်းများ ရှိသည့်ပြင် လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းကြာင့် အလုပ်သမား လျှော့ချခြင်းများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က မြန်မာ နိုင်ငံတွင်း၌ ပြည်ပသို့ တရားဝင် စေလွှတ်ထားသည့် အလုပ်သမားမှာ ၄၆၀၅၇ ဦးသာရှိပြီး တရားမဝင် သွားရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်သူများမှာ ၂ သန်းခန့် ရှိသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများက ၎င်း အလုပ်သမားများကို ပြန်လည် စေလွှတ်ခဲ့လျှင် ၎င်းတို့အတွက် နေထိုင်စရာနှင့် အလုပ်အကိုင်များ အသင့်ရှိနေသည်ဟု ပြောထားသည်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များစွာရှိသည်ဟု ဆိုထား သော်လည်း ပြည်တွင်းမှ အဆက်မပြတ် ခိုးထွက်နေသော အလုပ်သမားများမှာ များစွာရှိနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
Posted by donald at 1:40 AM No comments:
ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဥပဒေကြမ်း ၁၉၃၇
ဥပဒေကြမ်းအမှတ် - ၂၆ - ၁၉၃၇
နိဒါန်း၊ ၊ ၊ ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဥပဒေကြမ်းကို ထုတ်ပြန်လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။ ဤ
သို့သော အကြောင်းကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြဌာန်းလိုက်ပါသည်။
၁။ အမည် ။ အကျယ်အ၀န်းနှင့် စတင် အာဏာတည်သောနေ့ ။
(၁) ဤဥပဒေကို ကရင်အမျိုးသားများ နှစ်သစ်ကူးနေ့အသိအမှတ်ပြခြင်း ဥပဒေ ၁၉၃၇ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
(၂) ဤဥပဒေသည် ဘုရင်ခံက ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်သောနေ့ မှအစပြု၍ အထူးသဖြင့် ယခုကြေငြာသောအချိန်မှစ၍ ချက်ချင်းအာဏာတည်စေရမည်။
(၃) ဤဥပဒေသည် ဗြိတိသျှ မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးကို အာဏာသက်ရောက်စေရမည်။
(၁) ကရင်အမျိုးသားဆိုသည်မှာ ၎င်းတို့ ၏အမျိုးဇတ်၊ ဘာသာအယူဝါဒ၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတို့ နှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ၊ အားလုံးသော ကရင်မျိုးနွယ်များ ၊ မျိုးနွယ်စုများ၊ မိသားစုဝင်အနွယ်တူလူမျိုးများအားလုံးကို ဆိုလိုသည်။
(၂) ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့ သည် အခြားသောတိုင်းရင်းသား၊ ပြည်သူများ၊ အမျိုးသားများ၏ နှစ်သစ်ကူးနေ့အထိမ်အမှတ်များ၏ နှစ်သစ်ကူးနေ့ အတိုင်းပင် အတိအကျ အဓိပ္ပါယ်ရပေသည်။ ကောင်းမြတ်သောနှစ်၏ ပထမနေ့ဖြစ်၏။ ကရင်အမျိုးသားများ နှစ်သစ်ကူးနေ့ သည် မြန်မာပြက္ခဒိန်၊ ပြာသိုလဆန်း (၁)ရက်နေ့ နှင့် ဆီလျော်သည့် အတိုင်း ကရင်ပြက္ခဒိန်အရ (သလေး)လဆန်း(၁)ရက် (သို့ မဟုတ်)(၂)ရက်တွင် ကျရောက်ပေသည်။ နှစ်သစ်အလို့ငှာ ဤ (သလေး)လ (ပြာသိုလဆန်း)(၁)ရက်နေ့ကျရောက်သောအခါ ကရင်အမျိုးသားများသည် အိမ်သစ်များကို တည်ဆောက်ကြသည်။ ပစ္စည်းများကို အသစ်ပြုပြင်ကြ၏။ ထို့ အပြင် တောင်ကုန်းထူထပ်သောနေရာသစ်တို့ ၌ တောင်ယာသစ်များကိုလည်း သတ်မှတ်ကြသည်။ ဤနေ့ များကို အားစလုံးသောကရင်များက နေရာတိုင်းမှာ အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ရုပ်တု ကိုယ်ကွယ်သူကရင်များက နတ်များကို ကိုးကွယ်ပသခြင်း စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကရင်များက ဘုရားရှိခိုးကြခြင်း၊ ကျောင်းဇရပ်သွားခြင်း၊ သံဃာတော်များထံမှ တရားနာခြင်း စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကရင်များက ဆုတောင်းဘုရားရှိခိုးခြင်း စသည်တို့ အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအလိုက် ကရင်မျိုးနွယ်စုအားလုံးသည် ကြီးစွာသောစည်းဝေးခြင်းများပြုလျှက် စုရုံးကြသော ဘာသာရေးပွဲတော်များကို ပြုလုပ်ကြပေသည်။ သို့ ဖြစ်၍ ကရင်အမျိုးသားများ၏ သမိုင်းတွင် ဤနေ့ များသည် အကြီးကျယ်ဆုံးသော ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနေ့ များ ဖြစ်ကြပေသည်။
၁၉၄၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ (၃) ရက်နေ့ တွင် KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးက ဖဆပလ အစိုးရထံ ပရင်ပြည်ပေး ရန် စာရေးတောင်းဆိုခဲ့သည်။ စာကို တလအတွင်း (၁၉၄၈) ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ဖစပလ အစ်ိုရမှ KNU ထံ အကြောင်းပြန်ရန်၊ ပြန်စာမရရှိပါက (သို့ မဟုတတ်) ကရင်ပြည်ပြန်ပေးဖို့ ရန် ငြင်းဆိုပါက ကရင် အမျိုးသားများ ခြေတလှမ်း တက်လှမ်းမည်ဟု ပါရှိပါသည်။ ကရင်ပြည်တောင်းဆိုစာ ပိုမိုလေးနက်စေရန် ဖေဖေါ်ဝါရီ လ (၁၁)ရက်နေ့ ၌ မြန်မာတပြည်လုံးရှိ ကရင်အမျိုးသားများအားလုံး ကရင်ပြည်လိုလားကြောင်း မြို့ ပေါ်တက် ကရင် လူဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ယင်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း (၁၉၄၈) ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်တပြည်လုံးရှိ ကရင်အမျိုးသားများမြို့ ပေါ်တက်၍ ကရင်ပြည်လိုလားကြောင်း ကရင်လူထူဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပလေသည်။
အောက်မြန်မာပြည် ကရင်အများစု ရှိရာဒေသများတွင်သာမက မြောက်ဖက်မြစ်ကြီးနားမှ တောင်ဖက်မြိတ်မြို့ အထိ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် နမ့်ခမ်း၊ ကွတ်ခိုင်၊ လားရှိုး၊ တောင်ကြီး၊ ကျိုင်းတုံ၊ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းတွင် မိတ္ထီလာ၊ ချောက်၊ ရေနံချောင်း စသည်ဖြင့် တပြည်လုံးတွင် ဆန္ဒပြကြသည်။ ရန်သူဖဆကလမှလည်း ခြိမ်းခြောက်နှောက်ယှက် တား မြစ်ခြင်းကို အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့ သော် နှောက်ယှက်တားမြစ်ခြင်း အမျိုးမျိုးကြားမှ ကရင်တမျိုးသားလုံး (၂) ရက်၊ (၃) ရက်ခရီးများချီတက်၍ ဆန္ဒပြရာ ကရင်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပေါင်း (၄)သိန်းကျော် အသံတိတ် ဆန္ဒပြ၍ ထိုနေ့ ရက်အထိ မြန်မာပြည်သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။
ကရင်အမျိုးသားမျးသည် ကြွေးကြော်သံ (၄) ချက်ဖြင့် ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
စသည့်ကြွေးကြော်သံများပါသော ပိုစတာများ ကိုင်စွဲပြီး မြို့ များအတွင်းလှည့်လည်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာအသံတိတ် ဆန္ဒပြကြ ရာ မြန်မာပြည်သမိုင်းတွင် စည်ကမ်းအရှိဆုံး ဆန္ဒြုပပွဲအဖြစ် သမိုင်းတွင်ရစ်ခဲ့သည်။ ဤနိုင်ငံရေး ကြွေးကြွော်သံများ သည် ကရင်လူမျိုးများအနေနှင့်အခြားလူများနည်းတူ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိုလိုလားကြောင်း ပြည်တွင်းစစ်ကိုမလိုလားကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပြသနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနှင့်သာ တရားမျှတစွာ ဖြေရှင်းလိုကြောင်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကရင်ကံကြမ္မာကရင်ဖန်တီးခွင့်ရရှိရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကရင်အမျိုးသားရေး လှုပ် ရှားမှု သမိုင်းကြီးသည် နိုင်ငံရေးသမိုင်းတစု၊ သာမန်လူတစု၏ လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ဘဲ တမျိုးသားလုံးလက္ခဏာဆောင် သည် ပရင်အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်ကြောင်းကို ကရင်လူထူဆန္ဒပြပွဲကြီးက ဖေါ်ထုပ်ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တဆက်တည်းမှာပင် ပရင်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုနှင့် ကရင်တော်လှန်ရေးသည် ပြည်ပသွေးထိုးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ပြသလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကရင်အမျိုးသားထု ဆန္ဒပြပွဲ၏ နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပါယ် ကရင်တမျိုးသားလုံး၏ နိုင်ငံရေးအသိ မျိုးချစ်ပြည်ချစ် စိတ်ဓါတ်ကို မွေးထုပ်ပြသည့်နေ၊ ပရင်တမျိုးသားလုံး၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဖော်ထုပ်ပြသည့်နေ့ ၊ ကရင်အမျိုးသားများ၏ ဇာတိ သွေး၊ ဇာတိမာန်ကို ရဲရဲတောက် ဖော်ထုပ်ပြသည့်နေ့ ၊ နိုင်ငံရေး လက်ဦးမှုကို ကရင်များရယူသည့်နေ့ ၊ ကရင်ကိုကမ္ဘာ က ပိုမိုသိစေသည့်နေ့ ပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအကြောင်းများကြောင့် (၁၉၅၃)ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၃) ရက်မှ (၂၅) ရက် နေ့ အထိ ဖာပွန်မြို့ တွင်ကျင့်ပသော ကော်သူလေးပြည်လုံးဆိုင်ရာ
ထိုအသင်းကြီးက “ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ”ကို တနေ့ တည်း ကျင်းပလျှင် ပို၍သင့်လျှော်ကြောင်း သိရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့် အောက်လွှတ်တော်အမတ်များအား တွေ့ဆုံစေပြီး၊ မည်သည့်နေ့ ရက်တွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ကျင်းပရန် သင့်လျှော်မည်ကို ရှေးအထောက်အထားများ၊ အကြောင်းအရာများကို စုံစမ်း၍ “ဒေါကလူ”အသင်းကြီးအား ပ်ြန်လည်အစီရင်ခံစေသည်။
ပထမဆုံးသော ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့အသံလွှင့်မိန့် ခွန်း
ယနေ့ သည် သမိုင်းဝင်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုသော ကရင်အမျိုးသားနေ့လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနေ့ ရက်သည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး၏ မင်္ဂလာအခါနေ့ လည်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်သီးတစ်ခြား တစ်ကွဲတစ်ပြားနေထိုင်ခဲ့ကြရာမှ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ယနေ့ မှစ၍ တိုင်းရင်းသားအားလုံး၏ အရေးအခင်းနှင့်နိုင်ငံတော်အရေးအခင်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ လူဦးရေ နှစ်သန်းကျော်မျှရှိသော ကရင်အမျိုးသားများသည် မြန်မာပြည်၏ ကံကြမ္မာကို ဖန်တီးရာ၌ အဓိကမှ ပါဝင်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ လူမျိုး ဆိတ်သုဉ်းမသွားဘဲ တည်ရှိနေခဲ့သည်မှာ မည်သည့်အဖွဲ့ အစည်း၊ မည်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၊ မည်သူတို့ ၏ ပယောဂကျေးဇူးကြောင့်မှ မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ထူးခြားသော ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းများကြောင့်သာ ဖြစ်ပေသည်။ ပရိယာယ်မရှိ ရိုးသားကြသည်။ စိတ်ထားဖြောင့်မတ်ကြသည်။ ဂီတကို မြတ်နိုးသည်။ ဘုရားတရားကို လေးစားသည်။ အခြားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ဒိုးတးပေါင်းဖက် ဆက်ဆံပေါင်းသင်းသွားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးသားဂုဏ်သိက္ခာ၊ အရည်အချင်းများကို ခိုင်မာအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မြှင့်တင်ခြင်းများ ပြုနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ တစ်တွေ ဆုံြး့ဖတ်ချက်များ ချတ်မှတ်သည့်အချိန်ကျလာခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ သည် ယခင်ကဲ့သို့ ပင် တစ်သီးတစ်ခြား ရပ်တည်ရေးအတွက် ရပ်တည်ကြမည်လော၊ သို့ တည်းမဟုတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ကြမ္မာကို ဖန်တီးရာ၌ တစ်အပ်တစ်အား လက်တွဲပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်လော။
ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို တည်ဆောက်ရင်း ညီညွတ်သော မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ် သို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းကြမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ကိုယ်ကျိုးမဖက် မကြောက်ရွံ့ ဘဲ လူမျိုးရေးနှင့် ဘာသာရေး အာဃာတ အလျဉ်းကင်းစင်သော စိတ်ထားဖြင့် တိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်ကြမည်။
ယနေ့ အချိန်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အမျိုသားအမွေအနှစ်များ ရှေးဟောင်းကဗျာ၊ လင်္ကာပုံပြင်များ၊ ကရင်ပညာရှိများနှင့် ရိုးရာ “ယွာ”ဘုရားသခင်ကို သတိရအောက်မေ့လျက် ယင်းတို့ ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒများကို ပြန်လည်ကျင့်သုံးနေကြပါမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်လည်ကောင်း၊ တစ်အိမ်တစ်မိသားစုအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘ၀သစ်တစ်ရပ်ကို ပါဝင်ဖန်တီးဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ တွေးခေါ်စ်ိတ်ကူးလျက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့်လုပ်ငန်းများ ကြံဆချမှတ်ကာ အခြားသောတိုင်းရင်းသားများနှင့် တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း ကျရာကဏ္ဍမှ စည်းလုံးညီညွတ်သော လူမျိုးပေါင်းဆုံထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံအဖြစ် တာဝန်ယူသွားကြမည်။
ထို့ ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ တစ်တွေလည်း နိုင်ငံတော်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကျိုးလုပ်ငန်းများတွင် ဖော်ပြပါယုံကြည်ချက်များအတိုင်း ကိုယ်စွမ်း၊ ဥာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်ကြရန် ယနေ့ရက်မြတ် ကရင်နှစ်သစ်မင်္ဂလာအချိန်တွင် အဓိဌာန်ပြုကြပါစို့ 
(၁၉၃၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်လာလ ၂၁ ရက်)
၂၆၇၆ ခုနှစ်၊ သလေး၊ ထိုက်ခေါက်ဖိုး၊ ပြာသိုလဆန်း (၁)ရက် ။ ပုံ - စံစီဖိုး၊ ရွှေဘ၊လှဖေ၊ ဖေသာ၊ ဆစ်ဒနီလူနီ
Posted by donald at 1:35 AM 1 comment:
မေ(၂)ရက်နှင့် (၃)ရက်က အင်အားပြင်းထန်မှုအဆင့် ကြယ် ၄ ပွင့်ရှိ၍ တနာရီ မိုင် ၁၂ဝ နှုန်းဖြင့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ (၂)သိန်းခန့် သေသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂနှင့် အန်ဂျီအိုများက ခန့်မှန်းကြသည်။ နအဖက ၁၃၃၆၅၅ ယောက်သေဆုံး ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု ဆိုသည်။ အမည်မဖော်လိုသည့် နအဖအစိုးရ အရာရှိကြီးတဦးကမူ သေဆုံးသူ အရေအတွက် ၆ သိန်းကျော်သည်ဟု တရားမဝင် ပြောပြသည်။ ဤသို့ မုန်တိုင်းကြီးများ တိုက်ခတ်မှုဒဏ်ချက်ကို အခြားဘဝတူ တတိယကမ္ဘာ နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ ယခုလို တွေ့ရသည်။လွန်ခဲ့သည့် ၁၇ နှစ်ဖြစ်သော ၁၉၉၁ ခုက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (ကြယ် ၅ ပွင့်၊ တနာရီ မိုင် ၁၆ဝ) တွင် လူ ၁၃၅ဝဝဝ (တသိန်းသုံးသောင်းခွဲ) သေခဲ့သည်။ သို့သော် ၂ဝဝ၇ နိုဝင်ဘာလက ဆီဒါဆိုင်ကလုန်း (ကြယ် ၅ ပွင့်၊ တနာရီ မိုင် ၁၆ဝ)ကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် လူ ၁ဝဝဝဝ (တသောင်း) ခန့်သာသေခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်လည်း ၁၉၉၉ နိုဝင်ဘာလက သြရစ်သ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (ကြယ် ၅ ပွင့်၊ တနာရီ မိုင် ၁၆ဝ) တိုက်ရာ လူ ၁ဝဝဝဝ (တသောင်း) သေခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၆ နိုဝင်ဘာလက ဒူးရင်းတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း (ကြယ် ၄ ပွင့်၊ တနာရီ မိုင် ၁၄ဝ) တိုက်၍ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် လူ ၁၅ဝဝ သေခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၄ မတ်လမှာ ဂါဖီလို ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (ကြယ် ၅ ပွင့်၊ တနာရီ မိုင် ၁၆ဝ) တိုက်၍ အာဖရိကတိုက် မာဒါဂါစကာနိုင်ငံတွင် လူ ၄ဝဝ နီးပါး သေခဲ့သည်။လွန်ခဲ့သည့် ၃၈ နှစ်ဖြစ်သော ၁၉၇ဝ က အရှေ့ပါကစ္စတန် ဆိုင်ကလုန်း (ကြယ် ၃ ပွင့်၊ တနာရီ ၁၁၅ မိုင်) တွင် လူ ၅ သိန်း သေခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၄ဝ ဖြစ်သော ၁၉၆၈ ခု မေလက ရခိုင်ပြည် တပြည်လုံးကို စိစိညက်ညက် ကြေသွားစေခဲ့သည့် ထိုခေတ်က နာမည်ကျော် ရခိုင်လေမုန်တိုင်းကြီး (ကြယ် ၄ ပွင့်၊ တနာရီ မိုင် ၁၅ဝ) တွင် လူ ၁ဝဝဝ ကျော်သာ သေခဲ့သည်။ လူ ၁၈ဝဝ ကျော် သေသဖြင့် အကြီးအကျယ် နာမည်ပျက် သိက္ခာကျသွားသော အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ကက်ထရီနာ ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းမှာ ကြယ် ၅ ပွင့် အဆင့်ရှိပြီး တနာရီ ၁၇၅ မိုင်နှုန်း တိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ဤအချက်များကိုကြည့်လျှင် ၂ဝ ရာစု အကုန်နှင့် ၂၁ ရာစု အစပိုင်း၌ ဆင်းရဲခေတ်နောက်ကျသည့် တတိယကမ္ဘာ နိုင်ငံများတွင် ၂ဝ ရာစု အလယ်ပိုင်းနှင့် ယှဉ်ပါက ယေဘုယျအားဖြင့် လေမုန်တိုင်းဒဏ် ခံနိုင်ရည်ပြင်ဆင်မှု တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခြွင်းချက်ဖြစ်နေသည်။ ကြယ် ၄ ပွင့်အဆင့်၊ တနာရီ မိုင် ၁၂ဝ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တခုကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၁ ရာစုဆန်း တတိယကမ္ဘာ နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် လွန်ရောကျွံရော လူ ၁ဝဝဝဝ ခန့်သာ သေနိုင်သည်။သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ ယုတ်ညံ့မှု၊ ကိုယ်ကျိုးကြည့်မှုများကြောင့် ကာကွယ် ကယ်တင်နိုင်ရမည့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ့အသက်ပေါင်းများစွာ မလိုအပ်ဘဲ အလွန်အကျွံ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ မုန်တိုင်းကြိုတင် သတိပေးစနစ် ညံ့ဖျင်း (သို့) မရှိ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အဆောက်အဦစနစ် ညံ့ဖျင်း (သို့) မရှိ၊ ပညာပေးစနစ်များ ညံ့ဖျင်း (သို့) မရှိ။ ဤသို့ဖြင့် နအဖနှင့် နာဂစ်လက်အောက်တွင် အလွန်ဆုံးအားဖြင့် သေဆုံးသူ ၁ဝဝဝဝ (၁ သောင်း)မှာ နာဂစ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းထက်ပိုလွန်၍ သေဆုံးသူများမှာ မသေသင့်ဘဲနှင့် နအဖစစ်အုပ်စု ပယောဂကြောင့် သေဆုံးရခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများနှင့် ပြည်တွင်း အကူအညီများကို ပိတ်ပင်ခြင်း၊ အကန့်အသတ် အမျိုးမျိုး ချမှတ်ခြင်းတို့ကြောင့် နောက်ထပ် အသက်များ ထပ်မံဆုံးရှုံးရခြင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ ရုပ်ခန္ဓာအရနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်နစ်နာ ပျက်စီးခြင်းများလည်း ကြီးကြီးမားမား ရှိနေသည်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အဓမ္မလုပ်အားပေးမှု အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးရမှုများ၊ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း ဆုံးရှုံးရမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ သန်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်လုပ်နေရကာ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်လည်း ၅ သိန်းနှင့် ၁ သန်းကြား ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်နေရသည်။ဤသို့ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းကူးဝင်လာကြရာ၌ ၂ဝဝ၈ ဧပြီ ၉ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းမှ ထိုင်းတောင်ပိုင်းသို့ ခိုးပို့သည့် ကွန်တိန်ကားထဲ လေမွန်းပြီး မြန်မာ ၅၄ ယောက် သေခဲ့ရသည်။ ၂ဝဝ၇ ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်ကလည်း ကော့သောင်းမှ ရနောင်းသို့ ခိုးကူးသည့် စက်လှေမှောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသား ချင်းလူမျိုး ၄၅ ယောက်သေခဲ့ရသည်။ ၂ဝဝ၈ မတ် ၂ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံမှ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည် ၅ဝ ပင်လယ်ထဲ မျောနေသည်ကို သီရိလင်္ကာရေတပ်က တွေ့ရှိကယ်ဆယ်ခဲ့ရသည်။ နှစ်ပတ်ကြာ မျောနေစဉ်အတွင်း အစာရေစာပြတ်၍ လူ ၂ဝ သေခဲ့ရသည်။ ၂ဝဝ၈ မတ် ၈ ရက်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည် ၁၂ဝ ပါ စက်လှေတစီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲ နစ်မြုပ်ခဲ့ရာ ၅ ယောက်သာ အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၇ ဇွန်လက ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် ဝန်ကျောက်တွင် တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမားများကို ခိုးပို့သည့် ကားမှောက်၍ ၂၅ ယောက် သေခဲ့ရသည်။ဤလထဲမှာပင် တာ့က်ခရိုင်အတွင်း မြန်မာအလုပ်သမားများ ခိုးပို့သည့် ကားတိုက်၍ ၁ဝ ယောက် သေသေးသည်။ ၂ဝဝ၆ အောက်တိုဘာလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ သင်းဘူ ရီဒေသ၌ အလားတူ လူမှောင်ခိုကား မှောက်၍ ၅ ယောက်သေကာ ၂၈ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့သလို ၂ဝဝ၇ အောက်တိုဘာတွင်လည်း ပက်ခ်ျဘူရီအရပ်တွင် လူမှောင်ခိုကား မှောက်၍ တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမား ၈ ယောက်သေကာ ၁၄ ယောက် ဒဏ်ရာရခဲ့ပြန်သည်။ ၂ဝဝ၈ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင်မူ ကန်ချနဘူရီဒေသ ရေလှောင်ကန်ကို ခိုးဖြတ်နေသော လူမှောင်ခိုလှေ မှောက်၍ ကလေးငယ်များ အပါအဝင် မြန်မာ ၇ ယောက် သေခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်တွင်မူ ရနောင်းမှ ဟတ်ယိုင်သွား လူမှောင်ခိုကားကို ထိုင်းလုံခြုံရေးက ပစ်ခတ်၍ ၉ နှစ်သား ရခိုင်ကလေး မောင်ဦးမင်းစိုးသေပြီး ၃ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။နအဖစစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် ကရင်ပြည်၌ ရွာပေါင်း ၃ဝဝဝ ကျော် ဖျက်ဆီးခံရပြီး ကရင်အရပ်သား ၃ဝဝဝ ကျော် အသတ်ခံရသည်။ ကရင်ပြည်၊ မွန်ပြည်နှင့် တနင်္သာရီဒေသတို့တွင် ပြည်သူ ၆ သိန်းကျော်မှာ ပြည်တွင်းအိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည် IDP ဖြစ်နေပြီး ရွာပုံး ရွာရှောင်များတွင် နေရာအတည်တကျမရှိ လှည့်လည်ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်နေရသည်။ ကရင်ပြည်တွင် ၁၉၈၈ နှင့် ၂ဝဝ၄ ကြား၌ အနည်းဆုံး ကရင်အမျိုးသမီး ၁၂၅ ယောက် မုဒိမ်းကျင့်ခံရသည်။ ကရင်နီပြည်တွင်လည်း ပြည်သူ ၁ သိန်းနီးပါးမှာ အလားတူ အိုးအိမ်မဲ့ဒုက္ခသည် ဖြစ်နေသည်။ ဤဒေသများတွင် ၅ နှစ်အောက်ကလေး သေနှုန်းမှာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ပျမ်းမျှနှုန်းထက် နှစ်ဆကျော်နေသည်။ရှမ်းပြည်တွင်မူ ရွာပေါင်း ၂ဝဝဝ ခန့်ဖျက်ဆီးခံရပြီး ရှမ်းပြည်သူ ၂ဝဝဝ ခန့် အသတ်ခံရသည်။ ရှမ်း လူထု ၄ သိန်း ပြည်တွင်းအိုးအိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည် ဖြစ်နေသည်။ ၁၉၉၆ နှင့် ၂ဝဝ၁ ကြား၌ အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး ၆၂၅ ယောက် မုဒိမ်းကျင့်ခံရသည်။ ဤသည်မှာ လက်လှမ်းမှီသလောက် ကောက်ယူရရှိသည့် စာရင်းသာ ဖြစ်သည်။ တကယ်တမ်းအားဖြင့် ကရင်ပြည်၊ ကရင်နီပြည်၊ ရှမ်းပြည်တို့တွင် မုဒိမ်းကျင့်ခံရသည့် အမျိုးသမီး အရေအတွက်၊ အသတ်ခံရသည့် ပြည်သူလူထု အရေအတွက်တို့မှာ အထက်ပါ စာရင်းများထက် များစွာပို သည်။ အိုးအိမ် အတည်တကျမရှိ တောထဲတောင်ထဲ လှည့်ပတ်ရှောင်ပုန်း နေကြရသဖြင့် ငှက်ဖျား၊ တီဘီ၊ အာဟာရချို့တဲ့မှုနှင့် ရောဂါဘယ အမျိုးမျိုးကြောင့် ထောင်သောင်းချီ၍လည်း မသေသင့်ဘဲ သေနေကြရသည်။ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွန်၊ ရှမ်း ပြည်သူလူထု နှစ်သိန်းကျော်မှာ ထိုင်းနယ်စပ်သို့ နယ်စပ်ကျော် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအဖြစ် ရောက်ရှိနေရသည်။၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာလက သံဃာတော်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုကို နအဖစစ်အစိုးရက ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွင်းခဲ့ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော် ၁၅ ပါးအပါအဝင် ဆန္ဒပြသမား ၁ဝဝ နီးပါး အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၈ ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ အကျဉ်းထောင်များအတွင်း၌လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၅ဝ နီးပါး သေဆုံး ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထောင်နှင့်သောင်းနှင့် ချီသော သာမန်ရာဇဝတ် အကျဉ်းသားများလည်း အကျဉ်းထောင်များ၊ ရဲဘက်စခန်းများ၊ ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်များ၌ သေဆုံးခဲ့ကြ၊ သေဆုံးနေကြသည်။စင်စစ်အားဖြင့် နအဖစစ်အာဏာရှင်တို့၏ ပေါ်လစီများ၊ လုပ်ရပ်များ၊ တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုများမှာ ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ မှားယွင်းနေခြင်းမျှ မဟုတ်ပေ။ ဆရာမြသန်းတင့် ပြောဖူးသည့် ဆိုးယုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ Evil ဖြစ်သည်။ ဟစ်တလာ အပါအဝင် ကမ္ဘာပေါ်မှ အဆိုးဆုံး အာဏာရှင်များနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်သည်။ သံဃာကိုပင် ဗြောင်အတိအလင်း သတ်ရဲသော ဗမာပြည်အာဏာရှင်တို့အတွက် မလုပ်နိုင်စရာ ဆိုးယုတ်မှုဟူသည် ဘာမှမရှိ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ခမာနီအစိုးရလက်ထက် ၁၉၇၅ မှ ၁၉၇၉ အထိ လေးနှစ်အတွင်း ပြည်သူ ၂ သန်း သေခဲ့ရာ လူငါးသောင်းမှ ရှစ်သောင်းမှာ အသတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန်တသန်းကျော်မှာ ခမာနီအစိုးရ ပေါ်လစီများကြောင့် ငတ်ပြတ်ဖျားနာ ပင်ပန်းဆင်းရဲ၍ သေကြရခြင်း ဖြစ်သည်။ အရှေ့တီမော နိုင်ငံတွင်လည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ၁၉၇၅ မှ ၁၉၉၉ အထိ တိမောသား ၂ သောင်းကို သတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အင်ဒို နီးရှား အစိုးရကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ငတ်ပြတ်ပင်ပန်းမှုနှင့် ရောဂါဘယများကြောင့် နောက်ထပ် တိမောသား ၉ သောင်းသေခဲ့သည်။အီရတ်အာဏာရှင် ဆဒ္ဒန်ဟူစိန်က ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ကာ့ဒ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၅ သောင်းကို ဓာတုလက်နက်ဖြင့် လူမျိုးတုံး စစ်ဆင်ရေး လုပ်ခဲ့သည်။ ရဝမ်ဒါနိုင်ငံ၌ အာဏာရှင်အစိုးရနှင့် လက်ပါးစေတို့က ၁၉၉၄ ဧပြီလမှ ဇူလိုင်လအထိ ရက်ပေါင်း ၁ဝဝ အတွင်း လူ ၈ဝဝဝဝဝ (ရှစ်သိန်း)ကို သတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂-၉၅ မှာ ဆားဘီးယားနှင့် သြဇာခံ ဘော့စ်နီးယား ခွဲထွက်ဆာ့ဘ်တို့က ဘော့စ်နီးယား - ဟာဇီဂိုဗီးနား တွင် မွတ်ဆလင်များအပေါ် လူမျိုးတုံး စစ်ဆင်ရေး လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ဇူလိုင်လက ဆဘရင်နီကာမြို့တွင် ဘော့စ်နီးယား အရပ်သား ၈ဝဝဝ ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မလာဒစ် ဦးစီးသော ဆားဘီးယားတပ်က သတ်ပစ်ခဲ့သည်။ လူမျိုးတုံးသတ်ပွဲများ အဓိက ကျူးလွန်သည့် ဆာ့ဘ်လက်မရွံ့တပ်ဖွဲ့ အမည်မှာ စကော်ပီယံ ဟူ၏။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း နာဇီဂျာမဏီနိုင်ငံက ဂျူးလူမျိုး ၆ သန်း၊ ဆိုဗီယက်ပြည်သူ ၂၅ သန်းနှင့် သောင်းနှင့်ချီသော ဥရောပပြည်သူများကို သေစေခဲ့သည်။ အတော်များများမှာ ငတ်ပြတ်မှုဒဏ်၊ ရောဂါဘယဒဏ်တို့ဖြင့် အသက်ဆုံးရခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်ကြီးအပြီး၌ ဂျာမန်ဖက်ဆစ် ခေါင်းဆောင်များအား နျူရင်ဘတ် စစ်ခုံရုံးမှာ ခုံရုံးတင်စစ်ဆေး အပြစ်ပေးခဲ့သည်။ ဂျီနိုဆိုက်ဒ် (လူမျိုးတုံး သုတ်သင်မှု) ဆိုသော အယူအဆသည် ဥပဒေပိုင်းအရ ထိုအချိန်မှ အစပြုခဲ့ပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂက ၁၉၄၈ ခုတွင် ဂျီနိုဆိုက်ဒ် ကွန်ဗင်းရှင်း စာချုပ်ကို အသေအချာ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရာ ၁၉၅၁ ခုမှာ စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၃ဝ ကျော်က လက်ခံအတည်ပြုထားသည်။ ဤသဘောတူစာချုပ် ပုဒ်မ ၂ တွင် ဂျီနိုဆိုက်ဒ်ကို ယခုလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားသည်။“နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူအုပ်စု သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဆိုင်ရာ လူအုပ်စု သို့မဟုတ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လူအုပ်စုတခုကို တခုလုံးသော်လည်းကောင်း၊ တစိတ်တပိုင်းသော်လည်းကောင်း ဖျက်ဆီးပစ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အောက်ပါလုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်ခြင်း။(က) ယင်းလူအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊(ခ) ယင်းလူအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များကို ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းအရ သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းအရ သော်လည်းကောင်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း၊(ဂ) တခုလုံးအရ သို့မဟုတ် တစိတ်တပိုင်းအရ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုဖြစ်စေရန် အသေအချာ စီစဉ်ထားသည့် ဘဝအခြေအနေများကို ယင်းလူအုပ်စုအပေါ်၌ သက်ရောက်စေခြင်း၊(ဃ) ယင်းလူအုပ်စုအတွင်း ကလေးမွေးဖွားမှုများကို တားမြစ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်း၊ (င) ယင်းလူအုပ်စုမှ ကလေးသူငယ်များကို အခြားလူစုသို့ အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းပစ်ခြင်း။”၁၉၉၄ ခု ရဝမ်ဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခုံရုံးက ဂျီနိုဆိုက်ဒ်ကို ယခုလို ထပ်မံချဲ့ထွင်၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။“လူအုပ်စုတခုကို မသေရုံတမယ် မဝရေစာ ကျွေးထားခြင်း၊ နေအိမ်များမှ စနစ်တကျ မောင်းထုတ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို အနိမ့်ဆုံး လိုအပ်ချက်ထက် နှိမ့်ချပစ်ခြင်း။... ယင်းလူအုပ်စုကို တခုလုံးအရ သို့မဟုတ် တစိတ်တပိုင်းအရ ဖျက်ဆီးပစ်ရန် အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မုဒိမ်းမှု၊ လိင်ကိစ္စ အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ခြင်း။”ဂျီနိုဆိုက်ဒ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် အပိုဒ်ခွဲ (ခ) မှာ မနုဿဗေဒ ပညာရှင် ကဗျာဆရာ ဖေသက်နီ ပြောခဲ့ဖူးသည့် မဲန်တယ်လ်ဂျီနိုဆိုက်ဒ် ခေါ် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ဂျီနိုဆိုက်ဒ်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ ပြည်သားများ၏ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက်များ၊ ကျင့်ဝတ်တန်ဖိုးများ၊ စာရိတ္တ စာရဏတရားများကို ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နအဖလက်ထက်တွင် ကိုယ်ကျိုးကြည့် အကျင့်ပျက်မှုများ နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်း ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ကြီးထွားနေသည်။ သာမန်ပြည်သူထဲမှ ဖြစ်လာသော ရယက၊ ကြံ့ဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင်၊ မီးသတ်တို့သည် စစ်အာဏာရှင်တို့ထံမှ အရိုးအရင်းလေး ရဖို့အတွက် ဇာတ်တူသားဖြစ်သော ပြည်သူလူထုကို ရက်ရက်စက်စက် စားကုန်ကြသည်။ ဤသို့ စာရိတ္တ စာရဏ ပျက်ပြားမှုများ တနိုင်ငံလုံး လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေရာ နယ်စပ်ကျော်လွန်၍ ဒုက္ခသည်စခန်းများ၊ အတိုက်အခံ အဖွဲ့များထဲမှာပင် ရင်မောတုန်လှုပ်ဖွယ် လှိုက်စားနေသည်။ဂျီနိုဆိုက်ဒ်သည် လူသားမျိုးနွယ် ဆန့်ကျင်ရေး ရာဇဝတ်မှုများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး စစ်ကာလ အတွက်သာမက စစ်မဖြစ်သည့် ကာလအတွက်လည်း အကျုံးဝင်သည်။ဂျီနိုဆိုက်ဒ် ကျူးလွန်သည့် အာဏာရှင် နိုင်ငံများတွင် လူ့အသက်ကို တန်ဖိုးမထားသည့် သဘောထား ဓလေ့ထုံးတမ်းများ ပျံ့နှံ့နေပြီး အာဏာရှင် ဘက်တော်သားတို့က ကျန်နိုင်ငံသားတို့အား ဘာသာကွဲ ဒိဋ္ဌိများ၊ အရိုင်းအစိုင်းများ၊ သရုပ်ပျက်များ၊ ဥပဒေဘောင် ပြင်ပကလူများ၊ အောက်တန်းစား လူမျိုးများ၊ ခွဲထွက်ရေး သမားများ၊ သောင်းကျန်းသူ အဖျက်သမားများ၊ မင်းမဲ့ဝါဒီများ၊ အကြမ်းဖက်သမားများ၊ နယ်ချဲ့ လက်ပါးစေများ၊ ပုဆိန်ရိုးများ၊ လူတန်းစား ရန်သူများ၊ တန်ပြန်တော်လှန်ရေးသမားများ စသဖြင့် တံဆိပ်အမျိုးမျိုး သမုတ်ပြီး ဂျီနိုဆိုက်ဒ်ကို ကျူးလွန်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်အတွက်ကိုမူ မြင့်မြတ်သော တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူများ၊ မြင့်မြတ်သော လူမျိုးများ၊ အမျိုးဘာသာသာသနာ သန့်ရှင်းတည်တံ့ရေးကို စောင့်ထိန်းသူများ၊ အသိအမြင် ပြည့်ဝရင့်ကျက်သူများ၊ တိုင်းပြည်ကို အဓိက စောင့်ရှောက်နေရသူများ၊ နိုင်ငံအတွက် အဓိက အနစ်နာခံနေသူများ၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးသမားများ၊ စစ်မှန်သည့် တော်လှန်ရေးသမားများ စသည်ဖြင့် မိမိတို့ ကိုယ်မိမိ သတ်မှတ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူ၊ နိုင်ငံတော်၊ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ အမျိုးသား၊ မျိုးချစ်၊ ဝံသာနု၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဟူသော စကားလုံးများကို ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ရေလဲနှင့် သုံးလေ့ရှိသည်။ဂျာမန်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် ဂျာမန်ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့က နာဇီအာဏာရှင်အစိုးရကို အကြမ်းမဖက်ရေးနည်း၊ လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်နည်း၊ လျှို့ဝှက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်နည်း စသည့်နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၄ ခုတွင် ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ ဗိုလ်ချုပ်များဦးစီး၍ ဂျာမန်စစ်တပ်က ဟစ်တလာကို ဗုံးခွဲလုပ်ကြံ အာဏာသိမ်းရန် အထိပင် စီစဉ်ခဲ့သည်။ မအောင်မြင်ခဲ့။ နောင်တွင် ဘူလ်ဂေးရီးယား သမ္မတ ဖြစ်လာမည့် ဂျာမန်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင် ဒီမီထရော့ဗ် (ရိုက်ခ်ျစတက်လွှတ်တော် မီးရှို့မှုဖြင့် အမှုဆင် အဖမ်းခံရပြီးနောက် တရားခွင်၌ ကမ္ဘာကျော်လျှောက်လဲချက် ပေးခဲ့သူ)သည် ကွန်မြူနစ်ပီပီ ပြည်တွင်းမှ ပြည်သူ့အင်အားကို အဓိကထားပြီး နာဇီအာဏာရှင်စနစ် ဖြုတ်ချရေး အယူအဆကို ရပ်တည်ခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်-အင်္ဂလိပ်- ရုရှား မဟာမိတ် စစ်အင်အားဖြင့် ဂျာမန်အာဏာရှင်စနစ် ဖြုတ်ချရေးကို တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှား အကျိုးဆောင်ပေးသူ ဖြစ်သွားသည်။ အီတလီ ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်တို့ကို လည်း အီတလီ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ အီတလီ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ၊ အက်ရှင်ပါတီ၊ ခရစ်ယာန် ဒီမိုကရက်ပါတီ စသည်တို့က လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ အပါအဝင် သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဆန့်ကျင်အံတုခဲ့ကြသည်။ အလားတူ ဂျပန်ဖက်ဆစ်တို့ကိုလည်း ဂျပန်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက လျှို့ဝှက်အံတုခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတို့မှ (အဏုမြူဗုံး အပါအဝင်) စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့်သာ ဂျာမန်၊ အီတလီ၊ ဂျပန် ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်တို့ကို ဇီဝိန်ခြွေပစ်နိုင်ခဲ့သည်။သည်ဘက်ခေတ်တွင်လည်း ဂျီနိုဆိုက် ကျူးလွန်သည့် အဆိုးဆုံး အာဏာရှင်တို့ကို ပြင်ပမှ အင်အား သုံးသည့်နည်းဖြင့်သာ နိဂုံးချုပ်စေနိုင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ရဝမ်ဒါ၊ အရှေ့တိမော၊ ဘော့စ်နီးယား- ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ကိုဆိုဗို၊ လိုင်ဘေးရီးယား၊ ဆီယာရာလီယွန်း၊ ဟေတီ၊ ပနားမား၊ အီရတ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန် စသည့် ဥပမာများ အထင်အရှားရှိနေသည်။ မည်သူမျှ ငြင်းမရနိုင်သည့် သက်သေ သာဓကများဖြစ်သည်။ (နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများတွင်သာ ငြင်းစရာများ ပေါ်တတ်သည်။ သို့ရာတွင် နဂိုမူလ အာဏာရှင် ပြဿနာလောက် မကြီးတော့သည်မှာ သေချာသည်။)မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပြည်တွင်းမှ အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးသမား အတိုက်အခံများ၊ ပြည်သူများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကိုမူ လုံးဝပစ်ပယ်၍ မရ။ ဤပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုများ ရှိမှသာ ပြည်ပမှ အင်အားသုံး စွက်ဖက်မှုအတွက် လမ်းခင်းလမ်းပြရာ ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘောဒီးယားမှ ခမာနီခွဲထွက် သူပုန်ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်သော ဟင်ဆာရင်နှင့် ဟွန်ဆင်၊ ဘုရင့်ဂိုဏ်း သူပုန်ခေါင်းဆောင် မင်းသားကြီး သီဟာနု၊ ရဝမ်ဒါမျိုးချစ်တပ်ဦး သူပုန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပေါလ်ကာဂါမီ၊ အရှေ့တိမောမှ ဖရီတီလင် သူပုန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဂတ်စ်မာအိုနှင့် ဟိုဆေးရားမို့စ်ဟိုတာ၊ ဘော့စ်နီးယားမှ ရွေးကောက်ခံသမ္မတ အလီယာ အီဇက်ဘီဂိုဗစ်ခ်ျ၊ ကိုဆိုဗို လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် သူပုန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဟာရှင်သက်ဆီနှင့် အဂင်ချီကူး၊ လိုင်ဘေးရီးယား ညီညွတ်ရေး ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေး သူပုန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဆီကူကွန်နယ်နှင့် သောမတ်နင်မလီ၊ ဆီယာရာလီယွန်းမှ ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ကက်ဘာ၊ ဟေတီမှ ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဘုန်းတော်ကြီး အာရစ္စတိဒ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်မှ သူပုန်ခေါင်းဆောင် ရှားမာဆွဒ် စသူတို့ ရှိ၍သာ ပြင်ပမှ အင်အားသုံး ဝင်ရောက်နိုင်ခြင ဖြစ်သည်။ ခြွင်းချက်အားဖြင့် အချို့အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင် မဟာဗျူဟာမြောက် တူးမြောင်း၊ မဟာဗျူဟာမြောက် ရေနံစသည့် ထူးခြားချက်များကြောင့် ပြင်ပမှ အင်အားသုံး ဝင်ရောက်ခြင်းလည်း ရှိသည်။ထူးခြားချက်မှာ အာဏာရှင်ကို ပြည်တွင်းအင်အားစုများက လက်နက်ကိုင် အကြမ်းပတမ်းနည်း ဖြင့် အုံးအုံးခြိမ့်ခြိမ့် တုံ့ပြန်ရင်ဆိုင် ပွက်လောရိုက်နေသော high-intensity conflict နိုင်ငံများတွင် ပြည်ပမှ အင်အားသုံးဝင်ရောက်မှု ပိုလုပ်လေ့ရှိသည်။ မြန်မြန်ပွဲပြတ်လေ့ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှု လုံးဝမရှိ (သို့မဟုတ်) မပြင်းထန်သည့် low- intensity conflict အာဏာရှင်နိုင်ငံကို ပြင်ပမှ အင်အားသုံး စွက်ဖက် ပွဲသိမ်းပေးခြင်း ပြုလေ့မရှိ။ အထူးသဖြင့် အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာ အံတုသည့် နည်းလမ်းများကို လည်းကောင်း၊ ဒိုင်ယာလော့ကို မဟာဗျူဟာအဖြစ်လည်းကောင်း စွဲစွဲမြဲမြဲ ကျင့်သုံးနေသည့် အာဏာရှင် နိုင်ငံများကို ပြင်ပမှ အင်အားသုံး စွက်ဖက်ခြင်း မရှိပေ။ သို့ရာတွင် တဖက်မှကြည့်ပါက ယင်းကဲ့သို့ အာဏာရှင်နိုင်ငံများမှာ ကြယ် ၂ ပွင့် ကြယ် ၃ ပွင့်အဆင့် အာဏာရှင်နိုင်ငံများလောက်သာ ဖြစ်တတ်ပြီး ပြည်တွင်းအင်အား သက်သက်ဖြင့် အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီသို့ ကူးပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိကြသည်။သို့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာပေါ်မှ အာဏာရှင်များအနက် ဆိုးယုတ်မှုအဆင့် ကြယ် ၄ ပွင့် ကြယ် ၅ ပွင့်အထိ ရောက်သွားသည့် ဂျီနိုဆိုက် အာဏာရှင်များကို ပြင်ပမှ စစ်ကူအင်အားများကသာ ပွဲသိမ်းပေးနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပြီး ပြည်တွင်းအင်အားစုများက အာဏာရှင်ကို ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တန်ပြန်တိုက်ပွဲဝင်လေ၊ ပြည်ပမှစစ်အင်အားများ အမြန်ဆုံး ဝင်ရောက်ကူညီနိုင်ရေးကို လှုံ့ဆော်အားပေးရာ ရောက်လေဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သာ ဂျီနိုဆိုက်အာဏာရှင်ကို force out လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းအင်အားစုများက မည်သည့်တိုက်ပွဲမှ ဆူပွက်လှုပ်ရှားမနေဘဲ ပါးစပ်မှ ထိုင်အော်နေရုံမျှဖြင့် မည်သည့်နိုင်ငံခြား စစ်တပ်မှ ဝင်တိုက်ပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း။
Trafficking of Men in Thailand
The fight against human trafficking has for more thanadecade tried to protect women and children, often forgetting that men, too, are victims of "new slavery". Thailand remains one of the region's busiest human-trafficking centres.
The National Human Rights Commission reports that between 17 and 19 July 2003, six fishing trawlers with about 100 crew sailed from Tha Chalom in Samut Sakhon province to fish Indonesian territorial waters. Most of the crew were migrant workers and four were younger than 16. None were allowed home for three years. The trawlers returned to Thailand in July last year. However, thirty-eight never returned – dying on the job. Two were buried on one of Indonesia's myriad islands and the rest unceremoniously dumped at sea. One more crewmember died shortly upon his return. Others returned home seriously ill - emaciated, emotionally disturbed and unable to see, hear or walk properly.
A Samut Sakhon Hospital medical report diagnosed the men with serious vitamin deficiencies. They had suffered months without proper food or water, eating only fish. None have been paid. Yet, they are not considered by law to be victims of human trafficking.
When they demanded compensation their "employers" claimed the men were unknown and said crew employment was the responsibility of trawler skippers. The boat owners refuse to pay until the men can prove they were aboard. Complicating the issue is the registration of the men under Thai names. They are all Burmese, Mon and Karen migrant workers. In addition, they discovered the labour law in Thailand does not cover fishermen working outside Thai territory for more thanayear.
But,anew memorandum of understanding on Common Guidelines for Concerned Agencies Engaged in Human Trafficking and the Prevention and Suppression of Human Trafficking Bill are rays of hope. Men are covered by both documents. The memorandum was signed last week and broadens the scope ofasimilar 2003 document. The 2003 memorandum only included "children and women" in its target groups, but concerned agencies in 17 northern provinces have signed the new draft and expanded the scope to include protection of men. The memorandum will bring Thailand and its Social Development and Human Security Ministry up to world standards of protection.
The Prevention and Suppression of Human Trafficking Bill is before the National Legislative Assembly. Trafficking goes beyond the sex industry and child labour and many cases involve men, Sub-Committee on Coordination for Combating Trafficking in Children and Women chairperson Saisuree Chutikul said. Therefore, "[In the draft] we changed the wording from "women and children" to "human trafficking" because we found trafficking involves male victims," Saisuree, one of the world's leading voices in the fight against the trade in people, said.